किन मनाइन्छ तीज ? के छ यसको खास महत्व ? – Sadhaiko Khabar
किन मनाइन्छ तीज ? के छ यसको खास महत्व ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र २४, २०७८ समय: १०:४२:५०
काठमाडौँ / हिन्दू महिला दिदीबहिनीहरुले निराहार व्रत बसी हरितालिका तीज आज (बिहीबार) मनाउँदैछन् । हरेक वर्षको भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ ।
अघिल्लो दिन आडिलो र पोषक दर खाएर बसेका महिलाहरुले तिजका दिन पानी समेत नपिइ आफू, आफ्ना सन्तान र पतिदेवको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै ब्रत बस्ने चलन छ ।
तीजका दिन विहानै नुहाइ धुवाइ गरी भगवान शिवको आरधना गर्दै महिलाहरु नाचगान र रमाइलो गर्ने गरेका छन् । यद्यपि को’रोना म’हामारी रहेकाले तीजको दिनमा भी’डभाड नगर्न चिकित्सकको सुझाव छ ।
आफूले तपस्या गरेको वर्षदिन पुग्दासमेत फल नपाएपछि पार्वतीले एकदिन शिवको मुर्ति राखेर निराहार ब्रत बसिन् । यसरी पार्वती निराहार व्रत बसेपछि शिवजी आफै प्रकट भई इच्छा पुरा होस् भनी आर्शिवाद दिएकाले पार्वती र शिवको विवाह भएको विश्वास रहेको छ । उक्त दिन भाद्र शुक्ला तृतिया परेको थियो ।
दिनभरी व्रत बसेर साझमा भगवान शिवको आराधना गरेर गीत तथा नाचगान गर्ने चलन रहेको छ । घरमा महिलाले भोगेका दुख दिदीबहिनीसँग गीतको माध्यमबाट पोख्ने पुरानो चलन रहेको छ ।
यसरी छिमेकमा दिदी बहिनी जम्मा भएर रमाइलो गर्छन् । जन्मघर र आफ्ना आमा बुबा दाजु भाई दिदी बहीनी छा’ड्न बा’ध्य नारीहरुले यस दिन वर्ष भरीको सबै दु’ख बि’र्सीएर रमाउने गर्छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा को’रोनाको महामा’री फैलँदै गएकाले तीजमा मन्दिर नखु’ल्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । पशुपति भो’लि (शुक्रबार)बाट मात्रै खोलिने भएको छ ।